2014 – Year – Channel Myanmar
[18+] New Folder (2014) Dark Side Production မှ တင်ဆက်သည်။ ကိုရီးယားသမရိုးကျ ၁၈+ ဇာတ်အိမ်တွေကနေဖောက်ထွက်ပြီနှစ်ထောင်းအားရစရာ ကားကောင်းလေးတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။မိန်းကလေးတွေရဲ့ ယောကျာၤးလေးတစ်ယောက်အပေါ်မှာ ပိုက်ဆံပြီးရင် ဘာကအရေးအကြီးဆုံးဆိုတာကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မီးမောင်းထိုးပြထားတဲ့ကားလေးပါ....ဖက်တီး တစ်ယောက် အစား နဲ့ မိန်းမကိုမြင်ရင် ဘယ်လိုမှမနေနိုင်တဲ့ တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုးတာက သူ့ရဲ့ အစားကြူးမှု့က သူ့ကို ဖက်တီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေပြီး လုပ်သမျှ အလွဲလွဲအချော်ချော် ဖြစ်နေစေပါတယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို မြင်ရင် ဒါမှမဟုတ်သူ့ဘေးက ဖြတ်သွားရင်တောင် ဗို့အား သောင်းတစ်ထောင်မျက်လုံးနဲ့ ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးလိုက်ကြည့်ပါတယ်...သူကမိန်းမလိုချင်လွန်းလို့ ကြင်ရာဖက် တွေလိုက်ရှာပြီးတွေ့တွေ့နေတာကလည်း အမောပါပဲ...သူနဲ့တွေ့တဲ့မိန်းကလေးတွေကလည်း မထိရက်စရာ ကပိုကယိုအလှလေးတွေနဲ့ ဖြစ်နေတော့သူ့ခမျာ အခက်တွေ့နေပါတယ်သူ့ကိုလည်းကြည့်လေ လူကဖက်တီး မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုကြည့်ရင် မကြည့်သင့်တာတွေကိုပဲ စိုက်ကြည့်နေတော့...မိန်းကလေးတွေက မခံမရပ်နိုင်အောင်ဒေါသတွေထွက်ပြီး ထွက်ပြေးကြတာချည်းပဲ။တစ်နေ့မှာ ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်ရင်း ရည်းစားနဲ့ပြတ်ပြီး စိတ်လေနေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို မြင်မြင်ချင်းပဲ ချစ်မိသွားခဲ့ပါတယ်...သူက ချစ်ခွင့်ပန်တော့ ကောင်မလေးက "ရှင့်လိုဖက်တီးမျိုး ရွံတယ်" ဆိုပြီး ပြစ်ပြစ်ခါခါပြောပြီးငြင်းလိုက်ပါတယ်...သူလည်းစိတ်ပျက်ပျက်နဲ့ လမ်းဖြတ်ကူးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ကားတစ်စီးဝင်တိုက်တာခံရပြီးတော့ မျက်နှာတစ်ခုလုံးစုတ်ပြတ်သတ်သွားခဲ့ပါတယ်....သူ ဆေးရုံမှာ ...
[18+] New Folder (2014)
The Divine Move(2014) The Divine Move(2014) IMDb...6.7 မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းေနတဲ့ညတစ္ည.... မုိးခ်ိန္းသံေတြကုိဥေပကၡာၿပဳၿပီး အခန္းတစ္ခုအတြင္းမွာ လူ(၂)ေယာက္ဂုိကစားေနၾကတယ္... ေလာင္းကစားေလာကဟာ တစ္ကြက္ႀကဳိျမင္သူ ႏွာတစ္ဖ်ားသာစၿမဲမုိ႕ ဘယ္သူမွမသိေအာင္ ေနာက္ခံကစားေပးတဲ့သူလည္း ကုိယ္စီရွိၾကတယ္.... အက်ၤီအနက္နဲ႕လူကုိ ေနာက္ခံကစားေပးတဲ့သူကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ညီအရင္းျဖစ္တဲ့ ထုတ္ဆုတ္ပါပဲ... သုိ႕ေပမယ့္ သူတုိ႕ညီအကုိ(၂)ေယာက္ကံမေကာင္းခဲ့ဘူး...သူတုိ႕ ေနာက္ခံကစားေပးတာကုိ တစ္ဖက္အဖြဲ႕က သိသြားလုိ႕ ညီအကုိ(၂)ေယာက္လုံး အဖမ္းခံလုိက္ရတယ္... ညီအကုိ(၂)ေယာက္လုံး အားရေအာင္ႏွိပ္စက္သြားတဲ့အျပင္ အကုိျဖစ္သူကုိ လည္ပင္းကုိလွီးသတ္ခံလုိက္ရတယ္... ထယ္ဆုတ္အတြက္ မ်က္စိေရွ႕တြင္ပင္ အကုိျဖစ္သူသတ္ခံလုိက္ရတဲ့အျပင္ မိမိကုိယ္တုိင္မွာလည္း လူသတ္သမားအဖြဲ႕၏ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္မႈေၾကာင့္ အကုိျဖစ္သူအားသတ္မႈနဲ႕ေထာင္က်သြားပါေတာ့တယ္... ဒီေနာက္ပုိင္းေတာ့ နာက်ဥ္းမႈေတြျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ထယ္ဆုတ္အတြက္ က်ားနာတစ္ေကာင္အသြင္သုိ႕ေျပာင္းသြားပါေတာ့တယ္... ဒီကားက ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွာထြက္ရွိၿပီးေတာ့ ထယ္ဆုတ္အျဖစ္ Woo-sung Jung ကသရုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္... Cold eyes နဲ႕ Steel Rain တုိ႕ကုိၾကည့္ဖူးရင္ သူ႕ကုိရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္မွာပါ... အရပ္ ၆ေပ ၁လက္မ ၊မ်က္လုံးေပါက္ေမွးက်ဥ္းက်ဥ္းနဲ႕ ဒီမင္းသားႀကီးဟာ Cold eyes ထဲမွာဆုိ ေဘာပင္နဲဲ႕ ဇြတ္ခနဲ ဇြတ္ခနဲ ထုိးသတ္တာကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕သေဘာက်ခဲ့ၾကတယ္.. ေျပာရရင္ ဒီကားကေတာင္ပုိေတာင္ၾကမ္းမယ္ထင္တယ္... ဓားတုိေတြနဲ႕ စြတ္ခနဲ လည္ပင္းကုိျဖတ္လွီးတာေတြ မ်က္ႏွာေတြမတြန္႕ပဲ ဗုိက္ေတြကုိ ဓားနဲ႕ဇြတ္ခနဲထုိးတာေတြ တကယ့္ အမုိက္စား အက္ရွင္ခန္းေတြနဲ႕.....ဇာတ္လမ္း ...
Flowers in the Attic (2014) ဒီကားေလးကေတာ့ စာေရးဆရာ V.C Andrews ရဲ႕ Flowers in Attic ၀တၳဳကုိ အေျခခံၿပီး ႐ုိက္ကူးထားတဲ့ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ပါ။ ဒီဇာတ္ကားက ေယာက္်ားေသဆုံးသြားလုိ႔ သိပ္ခ်မ္းသာတဲ့ မိဘအိမ္မွာ ျပန္ၿပီးေနရတဲ့ အေမတစ္ေယာက္နဲ႔ ကေလးေလးေယာက္အေၾကာင္းကုိ အေျခခံထားတာပါ။ သာမန္ဇာတ္လမ္းေတြလုိမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ အတိတ္မွာ နာက်ည္းမုန္းတီးစရာေတြအျပည့္ရွိေနခဲ့ပါ။ မိဘ ခြင့္မျပဳခဲ့တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခုကို ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ကရင္း အေမအရင္း ျဖစ္ေပမဲ့ ကရင္းအေပၚ အေသမုန္းတီးေနတဲ့ ကရင္းရဲ႕ မိခင္ နဲ႔ အျပစ္မဲ့တဲ့ ကေလးေလးေယာက္ကုိ ထပ္ခုိးအခန္းက်ဥ္းေလးထဲမွာ ပိတ္ထားတဲ့ အဖြား၊ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းဘယ္ေလာက္ပဲ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေပမယ့္ မျမင္ႏုိင္တဲ့ လူေတြရဲ႕ စိတ္က အင္မတန္ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္ဆုိတာ ဒီဇာတ္လမ္းထဲမွာ ျမင္ေတြ႕ခံစားရမွာပါ။ အတိတ္က ဘယ္လုိအျဖစ္ေတြေၾကာင့္ ကရင္းရဲ႕ မိခင္က ကရင္းအေပၚကုိ ဘာေၾကာင့္ အေသမုန္းတီးေနတာလဲ? ကရင္းနဲ႔ သူ႕ကေလးေလးေယာက္ၾကားက ဆက္ဆံမႈေတြကေရာ စိတ္ေျဖစရာမရွိတဲ့အခါမ်ိဳးဆုိရင္ အရြယ္ေရာက္ေနတဲ့ ေယာက္်ားေလး မိန္းကေလးေတြရဲ႕ စိတ္မွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခံစားမႈေတြ လူေတြက ပုိင္ဆုိင္မႈေလာဘေတြနဲ႔ ယွဥ္လာတဲ့အခါ ေသြးသားေတာ္စပ္ေနေပမယ့္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့လုပ္ရပ္ေတြကုိ လုပ္တတ္တဲ့အေၾကာင္းေတြ ပါ၀င္တဲ့ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ပါ။ သာမန္ပတ္၀န္းက်င္က လက္ခံႏုိင္တဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ ကြဲလြဲေနတာမ်ိဳးပါတာျဖစ္တဲ့အတြက္ မိသားစုနဲ႔ အတူမၾကည့္ေစခ်င္ပါဘူး။ (ဇာတ္လမး္အၫႊန္းနဲ႔ ဘာသာျပန္သူကေတာ့ ...
Kung Fu Jungle (2014) Kung Fu Jungle (2014) IMDb - 6.5/10_____Rotten 75% အမှန်အကန်ချတာကိုမှ ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ဒီဇာတ်ကားကို bluray 5.1 CH နဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ရုပ်ရှင်အညွှန်းကတော့ mmmovieguide ကဖြစ်ပါတယ်.. Hahou Mo ဟာ သိုင်းပညာသင်ကြားပြသပေးနေတဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လူတစ်ယောက်ကို မတော်တဆသတ်လိုက်မိတဲ့အတွက်ကြောင့် ထောင်ကျနေသူတစ်ယောက်ပါ။ တစ်ရက်တော့ ထောင်ထဲမှာ TV ကြည့်နေတုန်း လူတစ်ယောက် သတ်ခံလိုက်ရတဲ့သတင်းကို ကြားလိုက်မိပါတော့တယ်။ သူဟာ ထိုလူသတ်မှုအကြောင်းကို သိပြီး ထိုအမှုကို စုံစမ်းနေတဲ့ စုံထောက် Luk Yuen-Sum ကို သူ ကူညီပေးမယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလျို့ဝှက်ချက်တွေပေါ်ပေါက်လာမလဲဆိုတာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပါ အက်ရှင်သိုင်းကား ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေ အကြိုက်တွေ့မယ့် ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ဖိုက်တင်ခန်းတွေက ပိုပြီး ရန်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။ တချို့အခန်းတွေတော့ အနည်းငယ်ရက်စက်တယ်လို့ထင်ရပြီး အခန်းအများစုကတော့ ကြည့်လို့အဆင်ပြေမှာပါ။ ဒါရိုက်တာ Teddy Chan က အကောင်းဆုံး ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပြီး Ip Man ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှ Donnie Yen, Charlie Yeung, Baoqiang Wang တို့ အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ File Size - 1.13 ...
Lucy ( 2014 ) လူစီဟာ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ တိုင်ပေမြို့မှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့ ကျောင်းသူတစ်ယောက်ပါ။သူ့ရဲ့ ရည်းစားက သူ့ကို လိမ်ခေါ်လာတာကြောင့် ကိုရီးယားကလူဆိုးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဆီမှာ အဖမ်းခံရပါတယ်။ သူ့ရည်းစားလည်းအသတ်ခံရပြီး သူကတော့ CPH4 လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ကြွဆေးတစ်မျိုးကိုသယ်ဆောင်ပေးဖို့ အကြပ်ကိုင်ခံရပါတယ်။ဘယ်လို သယ်ဆောင်ပေးရမလဲဆိုတော့ သူ့ဗိုက်ကိုခွဲ၊CPH4 အိတ်ကို ဗိုက်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူလိုမျိုး ထည့်ပေးခံလိုက်ရသူ ၄ ဦးရှိပြီး မတူညီတဲ့ နေရာတွေဆီ ပို့ပေးရမှာပါ။ဒါပေမယ့် သူ့ကို စောင့်ပေးရတဲ့ လူဆိုးတစ်ယောက်နဲ့ ပြဿနာတက်ပြီးဗိုက်ကို အကန်ခံရတာကြောင့် CPH4 အိတ်ပေါက်သွားပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲကို CPH4 တွေ တိုက်ရိုက်ဝင်ကုန်ပါတယ်။ပရော်ဖက်ဆာ ဆမ်မြူရယ် နော်မန်ဟာ သက်ရှိတွေရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြောတွေ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုကို သုတေသနပြုစာတမ်းရေးသားနေသူဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ သီအိုရီအရ လူသားတွေဟာသူတို့ဦးနှောက်ရဲ့ ၁၀%ကိုသာ အသုံးပြုနေကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။၂၀%ကို အသုံးပြုနိုင်သူတွေဟာ လင်းပိုင်တွေဖြစ်ပြီး ဆိုနာလှိုင်းတွေကိုအသုံးပြုရင်း တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင် ဆက်သွယ်ကြကြောင်းလည်း ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။မေးခွန်းက ဒီ့ထက်ပို အသုံးပြုခဲ့ရင်၊ အဆုံးစွန်ဆုံး ၁၀၀% အသုံးပြုခဲ့ရင် ...
A Hard Day ( 2014 ) A Hard Day (ကိုရီးယားအမည်-Take it to the End) ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်လေးဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ မှ ၂၀၁၄ခုနှစ်မှာရိုက်ကူးထားတဲ့မှုခင်းဇာတ်ကြောင်းအခြေခံ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရဲ့ဇာတ်ညွှန်းနဲ့ဒါရိုက်တာအဖြစ် Kim Seong-hun ကဖန်တီးရိုက်ကူးထားပြီးတော့ Lee Sun-kyun နဲ့Cho Jin-Woongတို့ကအဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။A Hard Day ရုပ်ရှင်ကားဟာ Cannes Film Festival ရဲ့Directors’ Fortnight Sectionမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့ရပါတယ်။Cannes ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ May 18,2014 မှာပြသခဲ့ပြီးတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့ May 29, 2014မှာပြသခဲ့ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ လာဘ်စားအကျင့်ပျက် စုံထောက်ရဲတစ်ဦးဟာသူ့ရဲ့မိခင် မကြာသေးမီက ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်အရေးတကြီးနဲ့ လှိုဏ်ခေါင်းလမ်းတွေကနေ အမြန်ကားမောင်းလာပါတယ်။သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဟာလည်း လာဘ်စားခြင်းကိစ္စအတွက်နဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေ ခံယူနေရပါတယ်။ရဲဟာ လမ်းပေါ်မှာ သွားနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကားနဲ့တိုက်မိသွားပြီးတော့လူသတ်မိသွားပါတယ် ။သူဟာကြောက်ရွံ့ပြီး အလောင်းကိုတိတ်တဆိတ်သယ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ?လူသတ်မှုကကောအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ပါမလား?ဘယ်လိုတွေဆက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့လာရနိုင်မလဲ ဆိုတာတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ် မှုခင်းတစ်ခုအနေနဲ့ ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။မင်းသား Lee Sun-kyun ...